Ka iPod Bedelka Music in Samsung Galaxy
> Resource > Samsung > Music Transfer ka iPod in Samsung Galaxy
Waxaan ahay casriyeeyo aan telefoonka, waxaana qabaa waxaan u tegayaa inaan heli Galaxy s2 marka la barbar dhigo iPhone 4. Laakiinse waxaan u ah taabashada iPod iyo waxaan walaalkay in haddii aan helo telefoonka cusub, waxaan siin lahaa iPod u sheegay. Laakiinse waxaan u songs runtii cabsi badan ku iPod iyo waxaan la yaaban hadii aan wareejiyo yaabaa songs iPod aan u gal s2 Galaxy.
Iyada oo boqolaal heeso on iPod ah, waxaa laga yaabaa in aadan sugi karin si ay u wareejiyo si aad Samsung Galaxy cusub, dhihi Galaxy S3. Haddii heesaha oo dhan waa laga soo gado Lugood Library, waxa aad furan kartaa folder Lugood ugu on your computer oo nuqul ka heeso aad Galaxy S3 cusub. Maxaa dhacaya haddii heesaha oo ku iPod waxaa goolka ka channels kale? Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay qalab dhinac saddexaad caawimaad ah. Halkan, waxaan idinku aad ugu boorinayna in ay isku dayaan Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waa mid ka mid-click qalab kala iibsiga phone si gaar ah loogu tala galay ah, kuwaas oo kaa caawinaya in aad heesaha oo dhan iyo playlists ka iPod wareejiyo Samsung Galaxy la eber khasaaro xogta.
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod in Samsung Galaxy
Download qalabka si ay u gudbiyaan music iPod in Samsung Galaxy. Markaas, iskaan tutorial fudud oo ku saabsan sida loo nuqul music ka iPod in Samsung Galaxy la version Windows ah. Users Mac qaadan kartaa tutorial ka mid ah.
Tallaabada 1. Run MobileTrans kombuutarka
Marka hore, soo dajiyo iyo ordi tan 1-click qalab kala iibsiga phone kombuutarka. Markaas, furmo suuqa hoose u muuqataa sida shaashadda hoose ayaa muujinaya.
Fiiro gaar ah: Qalabka kala iibsiga phone - Wondershare MobileTrans si buuxda u taageersan iPod taaban socda macruufka 5/6/7/8 iyo macruufka cusub 9, iyo qalabka Samsung Galaxy.
Tallaabada 2. Isku ku iPod iyo Samsung Galaxy si PC
Markaas, labadaba ah iPod iyo Samsung Galaxy xirmaan, sida Samsung Galaxy S3 in kombuutarka. MobileTrans Si deg deg ah iyaga lagu ogaan doonaa. Ka dib markii in, ka iPod iyo Samsung Galaxy ayaa la soo bandhigi doonaa oo ku yaalla si gooni gooni ah uu furmo suuqa hoose. Dhexdoodana "Flip" button. Waxaa Click, oo meelahooda lagu wadajir is badali doontaa.
Marka aad dooneyso in aad tirtirto oo dhan songs hadda aad Samsung Galaxy kuwa ka iPod in la sameeyo qol, kaliya aad u baahan tahay si sax ah "data Clear hor nuqul" tab. Haddii aad rabto in aad sii heesaha, iskaba daa tab ah.
Tallaabada 3. ka iPod Transfer Music inay Galaxy
Dhab ahaantii, MobileTrans kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan music, jadwalka taariikhda, sawiro, videos, iMessage, xiriirada on iPod in uu Samsung Galaxy. Si aad u wareejin music, waa in aad sii kaliya music hubiyaa. Markaas, bilowdo kala iibsiga music ah adigoo gujinaya "Start Copy". Marka iibsiga ah uu dhamaado, guji "OK".
Video soo socda waxay ku saabsan tahay wareejinta music ka iPod in Galaxy
Isku day MobileTrans inay ka iPod wareejiyo music in Samsung Galaxy, sida S3.